ရှမ်းခေါက်ဆွဲ | Wutyee Food House
seem very nice and not that difficult to do…will try when i move to new house 😉
ok plz try it!! Taste is so yummy!! 🙂
ဟုတ်ကဲ့.. တင်ပေးပါမယ်.. 🙂
I also want to know, how to make Shan Monyinchin plzz 🙂 🙂
I will post this recipe later and let you know!
အမရေ…ဟင်းတွေကြည့်ရတာအရမ်းစားချင်စရာကောင်းပြီတော့ ပျော်ဖို.ကောင်းတယ် …အမကအရမ်းတော်တာပဲ … Lace ကို ယိုးဒယားသင်းဘောသီးထောင်း လုပ်နည်းလေးပြောပြပါလါးဟင်…
Lace ရေ ယိုးဒယား သင်္ဘောသီးထောင်း လုပ်နည်း တင်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်.. ကျေးဇူးပါ.. 🙂
အမရေ ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုလို့ လေ ကျိုင်းတုံဘက်က ရှမ်းခေါက်ဆွဲနဲ့ သံလွင်ဒီဘက်ခြမ်းပေါ့နော် တောင်ကြီးတို့ လားရှိုးတို့ ဘက်ကရှမ်းခေါက်ဆွဲနဲ့ ကမတူဘူးနော်…. ဘာဖြစ်လို့ လဲတော့မသိဘူး ဒီဘက်ကရှမ်းခေါက်ဆွဲက အစီးတို့ အဖွယ်တို့ … သံလွင်အရှေ့ ခြမ်းကျတော့ အရည် နဲ့အသားလုံးနဲ့ ဘယ်လိုခေါ်လဲတော့မသိဘူး…… အဲဒီသံလွင် အရှေ့ ခြမ်းက ရှမ်းခေါက်ဆွဲလိုမျိုးလေး တင်ပေးပါလား…. မစားရတာလဲကြာပြီဆိုတော့လေ လုက်လဲလုပ်တတ်ဘူး…. 😀
တို့ဟူးနွေးလုပ်နည်းလေး သိရင် ပြောပြစေချင်ပါတယ်
Hung Awm Thang says:
Plz try it,,
ခေါက်ဆွဲ ကြော်နည်း http://www.wutyeefoodhouse.com/?p=1318 ဒီလင့်မှာ ရေးထားပါတယ်
Aye ei ei Aung says:
Shwe Pan Tee says:
မမရေ ရှကောပါကောမှုန့် (သို့ )ရှကောပါကောသီးခြောက်ကို ဆီပူလေးသတ်..ရှကောပါကောဆီချက်လေးလုပ်ပြီးထဲ့ရင် ရှမ်းခေါက်ဆွဲ အင်္န့ လေးပိုမွှေးပြီး အရသာလဲကောင်း..ရှကောပါကောမှုန့် (သို့ )ရှကောပါကောသီးခြောက်ကို တရုတ်တန်းမှာ ဝယ်လို့ ရပါတယ်..
ခုလို အကြံဥာဏ်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ။ နောက်တစ်ခါ ရှမ်းခေါက်ဆွဲလုပ်စားရင် ရှကောပါကောသီးခြောက် ထည့်လုပ်စားကြည့်မယ်
ပဲငပိ ကိုသိချင်ပါတယ် ဘယ်လိုအမိူးအစားကိုသုံးရမှာလဲ
ရှကောပါကောသီးက ဘယ်လိုဟာလဲ မသိဘူး ဓါတ်ပုံနဲ့ တကွ တင်ပေးစေခြင်ပါတယ်
ပဲငပိကို UFC တံဆိပ်ကို သုံးပါတယ်။ http://shoppingonline.bigc.co.th/media/catalog/product/cache/1/image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/8/8/8850025335814.jpg. ရျကောပါကောသီးကိုတော့ ၀တ်ရည်လည်း တခါမှ မတွေ့ဖူးဘူး.. 🙂
Google hmar black cardamon so pyi type yin ya tal.
Thanks for info, sis 🙂
Wutyee yay, Pls post Shan ngar htamin if possible. I can’t find it anywhere. Thank you.
ရှမ်းငါးထမင်းချဉ် လုပ်နည်း တင်ပေးပါ့မယ်နော်.. 🙂
tomorrow မှာလုပ်စားလိုက်မယ် ညီမလေး။
[…] ရှမ်းခေါက်ဆွဲ […]
နုတ်နုတ်” စင်း “
ရှကော ပါကော မှုန့် ကို တရုတ်တန်းမှာအလွယ်တကူမေးဝယ်လို့ ရပါတယ်
May I know how to make ice cream at home. Please reply me.
ရေခဲမုန့်လုပ်နည်း ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ်.. 🙂
Eain ka wife ka ser chin nay tar…chatt ktwae ya mal…thanks ma wutyee
Plz try 😀
Welcome bro 😀
ရှမ်းဟင်းထုပ်‌ လုပ်‌နည်း သိချင်‌ပါတယ်‌၊ သိရင်‌ ‌ဝေမျှ‌ပေးပါရှင်‌
ရှမ်းခေါက်ဆွဲခြောက်ဖတ်/အစိုဖတ် မရနိုင်တဲ့နေရာမှာ နေပါတယ်။ ရှမ်းခေါက်ဆွဲဖတ်အစား ဘာနဲ့အစားထိုး လုပ်စားလို့ ရလဲမသိဘူး။
ဒီမှာ rice noodle ဆိုတာမျိုး နဲ့ အီတာလျံ pasta ခြောက်တွေတော့ ရှိတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မဝတ် ရည်
တရုတ်အစားစာ ရှမ်းအစားအစာ ချက်ဲပုတ်နည်း သင်ချင်တယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ညွှန်ပေးပ်ဦး မ၀တ်ရည်ရေ
အမရေဒီနည်းအတိုင်းလုပ်စားဖြစ်တယ် ကျေးဇူးပါနော် စားချင်တာလေးတွေရှိတိုင်း အမ Page ကိုဝင်ကြည့်ပြီးချက်စားဖြစ်တယ်
​မြေအိုးမြီးရှည်​ လုပ်​နည်း​လေးတင်​​ပေးပါရှင့်​ 😀